မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: မျက်နှာလွှဲလို့ ခဲကိုပစ်
Mahn Koko - တရုတ်နိုင်ငံဟာ တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို လူပေါင်း ထောင်နဲ့ချီပြီး သေဒဏ်
ချနေတဲ့ နိုင်ငံပါ ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသလို ၊ မေးခွန်းထုတ်စရာ အများကြီးရှိတဲ့ တရားရေး
စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတယ် ။ ဒါပေမယ့် တပါးသူ နိုင်ငံ့အရေးကို ဝင်စွက်ဖက်လို့ မရသလို ၊ သင့်
လည်း မသင့်ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် "စိုင်းနော်ခမ်း" ကို လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားတာ ၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာ သေဒဏ်စီရင်
ချက်ကို အကောင်ထည် ဖေါ်တော့မှာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ၊ အချုပ်အချာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲ
ရေးကို တွင်တွင်ပြောနေခဲ့ကြသူတွေဆီက နားကွဲမတတ် တိတ်ဆိတ်နေတာဟာ ၊ ရုပ်ပျက်
ဆင်းပျက် ဖြစ်ရုံတင်မက ၊ သတ္တိဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုပါ နေ့စဉ်သုံး စကားတွေထဲက ဖယ်ထုတ်
ထားဖို့တောင် သင့်ပါတယ် ။
ဒီ အလိမ်ညာ ဇာတ်လမ်းကြီးထဲမှာ ၊ မလှုပ်ရဲ မဟရဲ မပြောရဲ မပြောတတ် ပြောရကောင်းမှန်း
လည်း မသိကြရင်တော့ ... မန္တလေးလိုမြို့တွေမှာ ဟိုလိုအရေးယူတယ် ဒီလိုအရေးယူတယ် ..
စတဲ့ အပေါ်ယံ မိတ်ကပ်ပေါင်ဒါ ဖို့တာလေးတွေလောက်နဲ့ နွံထဲမှာ နှာခေါင်းမမြုပ်မချင်း မျှော
(မှတ်ချက် - တရုတ်သင်္ဘောသားတွေကို ထိုင်းစစ်သားတွေက သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ
တရားခံတွေကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားပြီးသားပါ) ။
၀၁ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၃
Mahn Koko - အဖမ်းခံရပြီး လွှဲပြောင်းမှုတွေ လုပ်ပြီးချိန်အထိ စိုင်းနော်ခမ်းကို ဒူးထောက်ခိုင်း
တာ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်တွေ့တယ် ။
ဒါ့ပြင် ပုခုံးကို နှစ်ဖက်ညှပ်ဖိတွန်းပြီး ဦးညွှတ်အောင်လုပ်တာ ၊ လက်ရွေးစင် လုံခြုံရေး တပ်
သားတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းထားတာမို့ ထွက်ပြေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းလည်း
မရှိသူတစ်ယောက်ကို ကြိုးနဲ့တုပ်တာ ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတောင် မပြပဲ နိုင်ငံခြားသားကျမှ ရုပ်
မြင်သံကြားထဲ ထည့်လွှင့်တာတွေဟာ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ မဟုတ်ပါဘူး ။ တရားမျှတတဲ့ ဥပ
ဒေကို ဖေါ်ဆောင်ဖို့ထက် ၊ အာဏာရှင်တွေရဲ့ စရိုက်အတိုင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ
ကို သေကာနီးအထိ အငုတ်ပါမကျန် ရိုက်ချိုးပစ်တဲ့ အပြုအမူတွေပါ ။ လူသေကောင်တစ်ခု
အရင်းပြုပြီး နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ထုတ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ စိုင်းနော်ခမ်းရဲ့ တည်ကြည်သန့်ပြန့်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာနဲ့ ဟန်ဆောင်မှုမပါတဲ့
အပြုံးတွေကတော့ တရုတ်တွေအပါဝင် လူအတော်များများကို မေ့ဖို့မလွယ်အောင် ဖမ်းစား
၀၃ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၃
Mahn Koko - မနေ့ညနေက ကိုယ့်ကလေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသား လင်မယား
အိမ်မှာ ခဏရောက်ခဲ့ရတယ် ။ အခြေနေ ဖန်လာတော့ စကားပါ နည်းနည်းပြောဖြစ်တယ် ။
စကားဖလှယ်ရင်းနဲ့လည်း နှစ်ဖက်လုံး မသိခဲ့တာတွေနဲ့ အံ့သြစရာတွေလည်း ပါလာတယ် ။
တွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူဟာ ဒါကာမြို့မှာ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး သြစတြေးလျမှာ မဟာဘွဲ့နဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ပါ
ရထားပါတယ် ။ သူဟာ မွတ်ဆလင်နောက်ခံက လာပေမယ့် ၊ ဘာသာတရားကို မကျင့်သုံး
ဘူးလို့ ပြောတယ် ။ ဘုရားကို ယုံပေမယ့် အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးကောက်နေတဲ့ လူတွေကို မယုံ
ပါဘူးတဲ့ ။ ကလေးလည်း တစ်ယောက်ထဲပဲ ယူပါတယ် ။
သူ့ပညာရပ် အပြင်ဖက်ကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းသူလို့ သဘောထားကောင်း ထားလို့ရနိုင်
မယ့် သူ့အပြောအရ - သူနားလည်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အေးချမ်းပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့်
နယ်စပ်က ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို မြန်မာပြည်က မောင်းထုတ်တဲ့ကိစ္စကို နားမလည်ပါဘူး
စကားဆက်ကြပြန်တော့ ၊ မြန်မာပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာအပါဝင် အားလုံးဟာ ဗမာစကားပြော
တဲ့ ဗမာတွေပဲလို့ သူထင်ခဲ့တာကြောင့် ၊ ကျနော်တို့ဆီမှာ လူမျိုးစု အများကြီးရှိတာ ၊ မြေပိုင်
ခွင့် အာမခံချက် မရှိတာကစလို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ရတာမျိုးနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အတော်များများ
ကုလားမုန်းတယ် ဆိုတာမျိုးတွေဟာ သူ့အတွက် ထူးဆန်းတာတွေပါပဲ ။
စာရင်းချုပ်ရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖလှယ်ခွင့် ရခဲ့တာဟာပဲ နှစ်ဖက်လုံးအ
တွက် အကျိုးရှိတယ်လို့ ခံယူပါတယ် ။ တစ်ခု တွေးမိတာကလည်း ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများ
စုကနေ အေးချမ်းမှုကို ဖေါ်ဆောင်ကိုယ်စားပြုပြနိုင်ခဲ့လို့ ဘေးလူတွေကနေ အေးချမ်းတဲ့
ဘာသာလို့ မြင်နေကြတာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဘာသာမဆို အစွန်းရောက်သူတွေကနေ
အတိုင်းတာတစ်ခုထိ နေရာရပြီး ၊ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်မှုတွေကို ထုတ်ဖေါ်ပြလာတဲ့ တစ်
နေ့ကျရင်တော့ ၊ အရင်က ဘယ်လောက် ကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့ အလဟဿ ဖြစ်သွားမှာပါ
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှတော့ မတိုက်တွန်းလိုပါ ။ ဒါပေမယ့် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်းအားဖြင့် အစွန်း
ရောက်သူတွေရဲ့ အသံတွေဟာ ၊ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသယောင် ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ “ချောက်”
ကိုတော့ သတိရှိဖို့ ပြောပြချင်တယ် ။
၀၂ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၃
မင်းရေးလိုက်တဲ့စာကို ငါရတယ် ။
မင်းရဲ့ ခံစားချက်ပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်း ငါကြားရတယ် ။
သတင်းစာမျက်နှာတွေ ၊ ဘလော့နဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်တွေကအစ မင်းရဲ့ အားမလိုအားမရ ရေး
ထားတာတွေကိုလည်း ငါဖတ်ရတယ် ။
မင်းကို စာရှည်ရှည် ပြန်ရေးအုံးမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ခုနေတော့ တစ်ခုပဲ ပြောထားချင်သေး
တယ်ကွာ ။ အပေါ်မှာ စိုင်းနော်ခမ်းရဲ့ ကံကြမ္မာကို မင်းတွေ့တယ် မဟုတ်လား ။ အဲဒါကိုပဲ
အခြေခံပြီး ငါပြောပြမယ် ။
Middle Kingdom လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာမည်တပ်ထားတဲ့ စိနလို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်တွေဟာ ၊
နဂါးကြီး နိုးထလာသလို နှာမှုတ်သံပြင်းပြင်းနဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကို မျက်စောင်းထိုးလာပြီ ။ အ
မြီးတယမ်းယမ်းနဲ့ သူ့ခံတွင်းမှာလည်း မီးလျှံတွေ မြင်လာရပြီ ။
သူတို့ရဲ့ တိဘက်နဲ့ အနောက်မြောက်က ဒေသခံတွေကို ဝါးမျိုနေတဲ့အကြောင်းတွေ ငါ အ
ကျယ်မချဲ့ချင်သလို ၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲ အင်အားပြပြီး အသာစီးယူဖို့ လုပ်နေတာနဲ့
အိန္ဒိယလို နိုင်ငံကြီးကိုတောင် ဂရုမစိုက်တာတွေ ၊ မိုက်မိုက်ကန်းကန်း လုပ်တတ်တဲ့ ရုရှကို
လည်း လူဦးရေ တဖြည်းဖြည်း နည်းလာတယ်ဆိုတာ သိလို့ ရေရှည်တွက်ပြီး အရေးမလုပ်
တာတွေကို အကျယ်ချဲ့ မပြောချင်တော့ဘူး ။
ငါ လိုရင်းကို မပြောခင် မင်းကို စကားခံထားချင်တာလေးတွေ ရှိတယ် ။
တရုတ်ကိုကြည့် ၊ ပြီးရင် မင်း ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်ပြန်ကြည့် ၊ ဘယ်လို မြင်သလဲ ။
ငါကတော့ ချိနဲ့နေတဲ့ လူစုသေးသေးလေး တစ်စုအနေနဲ့ပဲ မြင်တယ် ။ ခေတ် ၊ စနစ် ၊ အ
ချိန်အခါနဲ့ အနေအထားတွေအောက်မှာ အာမခံချက်မဲ့တဲ့ မြူမှုန်တစ်မှုန်လိုပဲ လုံးပါးပါးသွား
နိုင်တဲ့ မတည်မြဲတဲ့ သက်ရှိ အသိုင်းဝိုင်းလေး တစ်ခုသာသာပါ ။ ပျောက်ကွယ်သွားလို့လဲ ၊
ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေကြမယ့် သက်ကြီးရွတ်တွ တစ်စုလောက်ကလွဲရင် ၊ ဘယ်သူမှလည်း လာ
ပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးပေးနေမှာ မဟုတ်ဘူး ။
နောက်တစ်ဆင့် ၊ မင်းအပါဝင် အချို့လူတွေ ပြောနေကြတာတွေကို ငါပြန်ရေးပြမယ် ။
စည်းလုံးကြပါ ၊ ညီညွတ်ကြပါ ၊ လူမျိုးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းကြပါတို့ ၊ လယ်ယာ
တောင်ယာလုပ် မုဆိုးပစ် ငါးဖမ်းနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ နေချင်တယ်တို့ ၊ နောက်ပြီး နှစ်
၆၀ လောက်က ဆောင်ပုဒ်တွေကို မြဲမြဲကိုင်ပြီး လက်သီးလက်မောင်း တန်းနေတာ တို့တွေ
တစ်ခါ ၊ မင်းကို မေးချင်တာလေးတွေ ရှိပြန်သေးတယ် ။
ပထမ မင်းတို့လုပ်ချင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းဖို့ ၊
ဒုတိယ မင်းလိုချင်တဲ့ ညီညွတ်ရေးတို့ ၊
နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရင် တော်လှန်ရေး ဆိုတာတို့ … ဘာပဲပြောပြော မင်းလိုလူဆီ
မှာ ဘာလိုနေလဲ ။
ငွေလိုနေတယ် မဟုတ်လား ။ မင်းဘာသာမင်း ယဉ်ကျေးမှု ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ တော်လှန်ရေး စ
သည်ဖြင့် ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါဖို့ ဒါက အရေးပါတယ် မဟုတ်လား ။ အဲ
သည်ငွေတွေကို မင်းဘယ်သူ့ဆီက လက်ဖြန့်တောင်းမလဲ ။ မင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အဖွဲ့
စည်းကြီးဆီမှာ ကုန်သွယ်ကူးသန်း စီးပွားရေးတွေအတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဌာနတစ်ခု
အဖြစ် စနစ်တကျ လုပ်ထားတာ မရှိတာကို ထိုင်အပြစ်တင်နေလို့ ဘာမှ ထူးလာမှာမဟုတ်
သလို ၊ ဖြတ်လမ်းနဲ့ ချမ်းသာအောင် လုပ်သွားခဲ့တဲ့ အခြားအဖွဲ့ကြီး တစ်ဖွဲ့ကိုလည်း မင်းအ
နေနဲ့ အတုယူဖို့ အားမပေးချင်ဘူး ။
ဒီတော့ စောမျိုးချစ် … ငါ့မှာ ပြောစရာ တစ်ခုရှိလာတယ် ။
ဒါဟာ ဖန်တရာတေနေတဲ့ စည်းလုံးရေးလည်း မဟုတ်ဘူး ။
ဘာထိန်းသိမ်းရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှလည်း မဟုတ်ဘူး ။
- မင်းအပါဝင် မင်းတို့ရဲ့ စိတ်ထားတွေကို အခြေခံကစပြီး ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ဖို့ပဲ ။
"စီးပွားရေးအမြင် ၊ စီးပွားရှာချင် ဥစ္စာဓန တည်ဆောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကို ပျိုးထောင်ကြဖို့ပဲ"။
မင်းအနေနဲ့ ငါ့ပြောတာကို သဘောတူချင်မှတူမယ် ။
ဒါပေမယ့် အမှောင်ထဲမှာ မီးခွက်တောင်မပါပဲ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ စိတ်တင်းပြီး လျှောက်နေ
တာမျိုး ၊ စစ်ပြေပြင်ကို မြေစာခဲကိုင်ပြီး မိုက်ရူးရဲ ပြေးတက်တာမျိုးတွေနဲ့စာရင် ၊ တစ်နည်း
အားဖြင့် သွေးထွက်ဖို့နဲ့စာရင် ချွေးထွက်မယ့်လမ်း ၊ သေဆုံးတိမ်မြုပ်ရဖို့နဲ့စာရင် စိတ်ပင်
ပန်း လူဆင်းရဲခံရမယ့် လမ်းကို ရွေးဖို့ရာတော့ မင်းအနေနဲ့ ငြင်းဆန်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အ
ကြောင်းပြချက် ရှိမယ်လို့ ငါမထင်ဘူး ။ ကျန်တာတွေကိုတော့ နောက်မှ စာရှည်ရှည် ရေး
တစ်ခုတော့ ဖြည့်ချင်သေးတယ်ကွာ ။ ငါစိတ်နောက်ကျိနေတဲ့ မနေ့ကတည်းကသာ ဒီ
စာကို ရေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆဲတဲ့စကားတွေနဲ့ မိုးမွန်နေမှာ သေချာတယ် ။ ခုနေခါ စိတ်
အေးလာမှ နားဝင်အောင် ပြောဖြစ်တာဟာ မှန်သလား ၊ မဟုတ်ရင်လည်း ထိရောက်မှု
အများကြီးပိုတဲ့ ဆဲစကားတွေနဲ့ မရေးဖြစ်တာကပဲ မှားသွားသလား ငါလည်း သိပ်တော့
မဝေခွဲတတ်သေးဘူး ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစာကို မင်းဖတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ပါ
တယ် ။ မင်းဆီတိုက်ရိုက်မရေးပဲ ၊ အများဖတ်နိုင်အောင် ရေးလိုက်တာကို မင်းနားလည်
၀၄ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၃
Posted by မန်းကိုကို at 3/04/2013
tint March 9, 2013 at 9:34 PM
ကိုမန်းကို ပါချီပါချက်ထင်နေတာ ခုမှ သိတော့တယ် ဆရာချစ်ဦးညိုအနွယ်ကိုးဗျ
လုံးချင်းအထူကြီးထုတ်ရတဲ့ ထိ ဆက်ရေးပါဗျာ ဟိုက လင်္ကာဒီပချစ်သူဆိုတော့ ကိုမန်းလဲ အာဖျံဂီရိချစ်သူပေါ့ဗျာ
ဒါမှ အချစ်ရှုံးသမား ဒဿဂိရိ ( အဲ ) စိုင်းစိုင်းနော်ခမ်း တို့ 
နော်ခမ်းလိုမိန်းမ ( မေဆွိလို စွာကျယ်ကျယ်အသံရှိတဲ့ နောက်ပေါက်အဆိုရှော်လေးတယောက်ယောက်အသံနဲ့) ဆီးသီးထုတ်စားရအောင်လို့ 
မန်းကိုကို March 10, 2013 at 10:59 PM
အေးဗျာ ဆရာတင့်ပေးတဲ့ “ချစ်ဦးကိုကိုညို”ဘွဲ့လိုဟာမျိုးက လှတော့ လှပါတယ်ဗျာ ၊ သို့သော် မရှိမဲ့စုမဲ့ သိက္ခာလေးတွေကို စွန့်ပစ်ပြီး သမိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာအဖြစ်နဲ့တော့ လက်မခံပါရစေနဲ့ ။ မပြည်စုံတဲ့ အပေါ်က အရေးအသားကိုသာ ဇာတ်ရည်လည်အောင် အရင်တော့ ရှင်းပြပါရစေဦးဗျာ ။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ ဖေ့ဘွတ်တစ်နေရာမှာ ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်တစ်ပိုင်းက အောက်ကအတိုင်းပါ -
“စိုင်းနော်ခမ်းဟာ သူတော်စင် မဟုတ်ပါ ။ သူအပြစ် မရှိဘူးလို့လည်း တရားလွှတ် ပြောလို့မရပါ ။ သို့သော် ဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာ နှုတ်ပိတ်တဲ့ ၊ နယ်လုတဲ့ ၊ ဒါးပြကြီးတွေက တရားဥပဒေ နာမည်ခံပြီး အချုပ်ချာ အာဏာနဲ့ အခြားလူတွေရဲ့ သိက္ခာကို စော်ကားမော်ကားလုပ်ပြီး ဒါးပြလေးကို ရှင်းထုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ ပြောနေတာပါ ။”
တခါ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ သတင်းတွေကို ခြုံငုံစဉ်းစားရင် ဟာကွက်တွေ အများကြီး ဖြစ်နေပါတယ် ။
ယေဘုယျအားဖြင့် အပေါ်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့သလို ၊ တပါးသူ နိုင်ငံ့အရေးကို ဝင်စွက်ဖက်လို့ မရသလို ၊ သင့်
လည်း မသင့်ပါဘူး - ဆိုပေမယ့် ၊ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး တရားရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဦးတည်ချက်တွေ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ သုံးသပ်နိုင်ခွင့် ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခွင့် မေးခွန်းထုတ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
အဦးဆုံး သင်္ဘောသား ၁၃ ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စကိုပဲကြည့်ရင် - ခေါင်းဆောင်လုပ်သူဟာ လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တာဝန်ယူရတယ် ဆိုတဲ့ တစ်ချက်ထဲနဲ့တင် မီးခိုးကြွက်လျောက် ထောက်ပြနှိုင်းယှဉ်ကြည့်စရာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနေပါပြီ ။ စိုင်းနော်ခမ်းကနေ တရားရုံးမှာ တရားဝင် ဝန်မခံခဲ့တာ ၊ အခင်းဖြစ်တဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာ စိတ်ကြွဆေး သိန်းနဲ့ချီပြီး တွေ့ခဲ့တာ ၊ စိုင်းနော်ခမ်းဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး ကိစ္စတွေမှာ ရှမ်းလူမျိုးထဲက တစ်ဦးတည်းသော ထင်ရှားသူဖြစ်ပြီး စူပါ့စူပါတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့အထဲက လက်ပူးလက်ကြပ်မိတာတောင် ဗြောင်လွှတ်ပေးခဲ့တာတွေ ၊ စိုင်းနော်ခမ်းကို လာအိုမှာမိစဉ်က ရခဲ့တဲ့ငွေသားနဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေကို ဖြောင်ပစ်တာ ၊ သေသွားတဲ့ သင်္ဘောသားတွေကို စိုင်းနော်ခမ်းက ငွေကြေးတွေ ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုပုံလဲ ဘာကြောင့်လဲ ဒါဟာ တရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေလား စသည်ဖြင့် ထည့်တွက်စရာနဲ့ မေးခွန်းတွေက ဘယ်တော့မှ လိပ်ပတ်လည်လာမယ့် အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး ။
နောက်တစ်ခါ လူသတ်မှုမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ထိုင်းစစ်သားတွေကိုတောင် စစ်ဆေး ဖေါ်ထုတ်လို့မပြီးသေးပဲ ၊ တာဝန်ရှိတယ်လို့ စွတ်စွဲခံရသူကို အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပြင် ပြစ်ဒဏ်ကို အလောသုံးဆယ် အကောင်ထည် ဖေါ်ခဲ့တာတွေဟာ - မှားတာရှိရင် နောင်လာနောင်ခါဈေး ၊ ခုလိုနေတာက နှုတ်ပိတ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေး အမြတ်အစွန်းရဖို့ ဆိုသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျနော်ယူဆတယ် ။
ခုနောက်ဆုံး စိုင်းနော်ခမ်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်း ရေးထားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်က ဒီမှာပါ - http://www.atimes.com/atimes/China/CHIN-01-080313.html
အချိန်ရှိရင်တော့ ဖတ်ကြည့်ပါဦး ။
အဆုံးသတ်ကတော့ - ကျနော့်အနေနဲ့ တရုတ်မုန်းတီးရေးတရား လမ်းကြောင်းချပေးတာ မဟုတ်သလို ၊ ကြွယ်ဝမှုကို လက်နက်ကိုင်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ဆက်နွယ်ရှာဖွေတာကို ထောက်ခံအားပေးတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ စိုင်းနော်ခမ်း မရှိတော့တာဟာလည်း အဆိုးနဲ့ အကောင်း သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာမှာပါ ။ အကောင်းဖက်ကို မျှော်လင့်ပေမယ့် ၊ လတ်တလောတော့ အဆိုးဖက် ပိုပြီးလည်း များလာကောင်း များလာနိုင်ပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်ရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ လစ်ဟာနေတဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး ၊ ရူးချင်ယောင်ဆောင် နေသူတွေကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပြဖို့ ကြိုးပမ်းချက် တစ်ခုသာပါဗျာ ။
မန်းကိုကို March 11, 2013 at 1:34 PM
ဖူ့တာမိုက်ဘလော့မှာ "ဠင်းတနဲ့ အလှချင်းပြိုင်မလို့လား" ဆိုတဲ့ပို့စ်လေး ဖတ်မိတယ် ။
အဆုံးသတ်မှာ သူ့ရဲ့အမြင်က ဒီလိုပါ -
"ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးမဆို ငွေလိုအပ်တာမှန်ပေမယ့် အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဆိုတာမရှိလျင် အဲဒီငွေဟာ လူကို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။"
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ စကားပါ ။ သို့သော် မှတ်ချက်ပေးဖို့က နေရာမရှိတာနဲ့ ၊ ခုမြင် နောက်ပျောက်သွားတတ်တဲ့ စီဘောက်ထဲလည်း မရေးချင်တာ တစ်ကြောင်းကြောင့် ကိုယ့်ပို့စ်အောက်ကနေပဲ စာပြန်ရေးလိုက်ရတော့တယ် ။
ပထမတစ်ချက် - ကျနော်ရေးတာကို ဖူ့တာမိုက်တစ်ယောက် လိပ်ပတ်မလည်သေးလို့ အမြင်စောင်းသွားတယ် ထင်ပါတယ် ။
အရင်ကလည်း ကျနော်ပြောဖူးပါတယ် ။ ညီအစ်ကို အရင်းတွေတောင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၆ လလောက်မတွေ့ပဲနေရင် ကြားစကားနားထောင်ပြီး ၊ ပြန်တွေ့တာနဲ့ ပြေးမဖက်ပဲ ပြေးထိုးကြတာမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြဖို့ ၊ ဝေမျှဖလှယ်ကြဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ။ နောင်လည်း ဆက်ပြောသွားဦးမှာပါ ။
(မဆိုင်ဘူး ထင်ချင်ထင်လို့ရပေမယ့် တွေးမိတာတစ်ခုက ၊ ကရင်တွေထဲမှာ ကိုယ်တွေလို လူကြီးတွေတောင် ဒီလို အလွယ်တကူ အထင်လွဲတတ်ကြရင် ၊ အောက်ခြေက လူငယ်တွေဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သတ်ကြဖြတ်ကြအထိ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် မထူးဆန်းဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရနိုင်မယ် လို့ပါ ။ တွေးကြည့်တာပါ ၊ ဖူ့တာမိုက်ကို အပြစ်တင်နေတာတော့ မဟုတ်ပါ) ။
နောက်တစ်ခုက - ကျနော်ကနေ "စိတ်ထားတွေ အခြေကနေစပြီး ပြောင်းပစ်ဖို့"လို့ ဆိုခဲ့ရာမှာ ၊ ရှိပြီးသားတွေကို စွန့်ပယ်လိုက်ဖို့ မပြောခဲ့ပါဘူး ။
အိမ်ရှင်ကနေ "ကလေးရေချိုးပေးပြီးရင် ဇလုံကို သွန်ပစ်လိုက်" လို့ပြောတာနဲ့ ၊ ရေချိုးပေးပြီးတဲ့အခါ ဇလုံထဲက ရေကော ကလေးကိုပါ သွန်ပြစ်လိုက်တဲ့ ကလေးထိန်းလို လိုက်လုပ်ဖို့လောက် အထိတော့ ကျနော်လည်း မမိုက်မဲပါဘူး ခင်ဗျား ။
ဒီတော့ စာရင်းချုပ်ရင် ၊ ကျနော်ရေးခဲ့တာတွေရဲ့ ဆိုလိုရင်းက - အားအင်ချိနဲ့နေတဲ့ ဖိုးသူတော်အတွက် တောင်ဝှေးလိုတယ် ၊ ရှာဖွေအသုံးပြုသင့်တယ် ဆိုတာပါပဲ ။ အကူဖြစ်မယ့် တောင်ဝှေးကို လမ်းလျှောက်ခိုင်းပြီး ၊ အဓိကဇာတ်ဆောင် ဖိုးသူတော်ကို လမ်းဘေးကို လွှင့်ပစ်ဖို့ အကြံပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရရင် ၊ ကျနော်မြင်သမျှကို စက်နဲ့လှိမ့်ထုတ်သလို အန်ထွက်လာသလို ရေးချလို့ ရပါတယ် ။ သို့သော် လူသားကျနော့်အနေနဲ့ စိတ်အခြေနေပေါ် မူတည်သလို ၊ အခြား ထည့်တွက်တာတွေလည်း ဟိုဟိုသည်သည် ရှိတာကြောင့် မရေးဖြစ်သေးတာပါလို့ ဖြေရှင်းရင်း ...... ။
ဆီဆိုင်မြို့တွင် လက်ပစ်ဗုံးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများဖမ်းမိ
လူမျိုးရေးစိတ်ဓါတ် နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့ ရေး
K ငြိမ်းချမ်း – လွင့်နေတဲ့လမ်းထဲက ကဗျာတွေ
ကမ်ဘာပျေါမှာ လူတှအေမြားဆုံး စုဝေးခဲ့ကွတဲ့ ဟိန်ဒူဘာသာရေးပှဲတျော
ဇွဲကပင်တောင် ကေဘယ်(လ်)ကားကို ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှသာ စတင်ပြေးဆွဲမည်
မန်တလေး ကြောကျမကျြပှဲ ကပျြသိနျးပေါငျး ၆၇၀ဝ ခနျ့နှငျ့ ဒျေါလာ ၅၀၀၀ ဖိုး ရောငျးရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ရေနှင့်မီးရရှိရေး ရိခေါ်ဒါရ်မြို့ဒေသခံ ရပ်မိရပ်ဖများမှတင်ပြ
Elephant foot yam farmers face challenges due to lack of technical support despite good price
4 Ways Responsive Web Design Benefits Your SEO
How To Help The Restaurant Owner Affected By Fyre Festival
လူမင်း၊ ဘေဘီမောင် တို့ပါဝင်ထားတဲ့ "နွံ" ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကွင်း
NFL Playoffs A Hit In China, Too
Tencent looks for growth after year to forget
Distant Future Tradeoffs
OCIE Examination Priorities for 2019
(58) The First Newborn Baby in 2019: Hnin Htet Htet Khiang
The Avangard Threat: Is ItaGame Changer?
The Unfinished Business of Baltic Security
Raytheon tapped for DBR System Support | Delta IV rocket launched following heavy delay | Cheetal helicopter facing rotor blade problems
Google Hangouts to begin heading into the sunset in October - CNET
ဦးပွား စကား ၊ စောမျိုးချစ် ၊ တစ်ကြောင်းရေး မှတ်ချ...
နိုင်ငံရေး ကကြီးခခွေး (၁)
Hong Kong to unveil bill making mocking of China's anthemacrime
Avian Cholera Killed Thousands of Birds at California’s Salton Sea This Month
How to promote civility during polarized times
Key players in the Mueller Russia investigation
ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၄ )
Kalsium Bagaimana Anda Bisa Mencukupi Dalam Segelas Susu ?
Ciri-ciri seorang guru yang handal
(အသံကြားချင်ရင် စကားလျှော့ပါ) မျိုးမြင့်ချို
ဖိုးဂျီဝါး။ အပိုင်း(၁) Fourth Generation War 4GW(Part 1)